Indray mjery | NewsMada
Mivory voalohany amin’ity taona ity etsy 67 ha ny fikambanana AMC Mad ivondronan’ireo mpitsabo tsy miankina miasa amin’ireo toerana saro-dalana sy lavitry ny tanàn-dehibe. 20 taona ny nijoroan’ny fikambanana ary mifameno amin’ny rafitry ny fahasalamana efa misy eo amin’ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka. Tanjona ny fanetsiketsehana ny fikambanana sy fanamafisana ny fiaraha-miasa amin’ireo mpiara-miombon’antoka. Lohahevitra maro ny novelabelarina nandritra ny dimy andro. Hifarana rahampitso ny fivoriambe.
Ho an’ny faritra Vakinankaratra, miisa 993 ireo olona voan’ny kitrotro hatramin’izao ka maty ny roa tamin’ireo izay tany amin’ny distrikan’Ambatolampy sy ny distrikan’ Antanifotsy. Ny 14 janoary ka hatramin’ny 18 janoary izao, hisy ny vaksiny faobe ho an’ny zaza sviy volana ka hatramin’ny 9 taona hatao ho fiadiana amin’ny valanaretina kitrotro amin’ireo distrika efatra ato anatin’ny faritra Vakinankaratra : ny distrikan’Antsirabe I sy II, ny distrikan’Ambatolampy ary ny distrikan’Antanifotsy.
Noho ny fiaraha-miasan’ny boriborintany fahenina sy ny kaoperativan’ny taxi-be eny an-toerana, natomboka omaly ny fanamboaran-dalana eny amin’ny boriborintany fahenina.
Lalana rarivato efa simba no hatsaraina hatao « béton » hanalana ny fahasahiranan’ny mponina rehefa fotoam-pahavaratra toy izao. Anjaran’ny tsirairay sisa ny mikojakoja ireo fotodrafitrasa vita mba haharitra sy ho azo ampiasaina mandavantaona.